Ejiri ụgbọala nke ụgbọala na-adọba ụgbọala nke ìhè ọkụ China Manufacturer
Nkọwa:Uwe Akpụkpọ ụkwụ,Egwuregwu Ọdụ Ụgbọ Osimiri,Oghere ebe a na-adọba ụgbọala n'ógbè
Home > Ngwaahịa > Ejiri Lightbox Shoebox > Ejiri akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ > Ejiri ụgbọala nke ụgbọala na-adọba ụgbọala nke ìhè ọkụ
NKWU NDỊ NA-EKWU: Bbier na- eduzi ìhè akpụkpọ ụkwụ na-adọba ụgbọala nnukwu na-egbuke egbuke na elu lumens irè 135lm / watt, 400W HPS / MH nnọchi.
OWU OWU OWU: Bbier Parking Lot Light Nke oma bu ihe omuma nke oma maka iri puku ise nke ndu.
MGBE A GA-EKWU: Mpaghara Bbier Led Area na-abịa site na nkedo na-adaba ngwa ngwa 2-3 / 8 nke anụ ọhịa na-agbakwunye mfe iji wụnye ọkụ na-adọba ụgbọala, ọ dị mfe igbanwe ihe nkedo na-arụ ọrụ maka ogwe aka nke ogwe aka na nkwụnye anyị.
MGBE A GA-EKWU - Ụzọ anyị si aga n'okporo ámá dị mma bụ ihe dị mma maka ngwa n'èzí dị ka ìhè idei mmiri, ìhè nchekwa, ọkụ ihu, ọkụ ihu n'okporo ámá, ọkụ ọkụ, ebe nchekwa ụgbọala.
EKWỤKWỌ ECHICHE 5: Bbier S hoebox parking lot Ìhè na -akwado site na ETL, Consortium Lens Consortium (DLC) ọkụ ọkụ ọkụ a kwadoro, nke hụ na mma mma, nchekwa na ntụkwasị obi.
Uwe Akpụkpọ ụkwụ Egwuregwu Ọdụ Ụgbọ Osimiri Oghere ebe a na-adọba ụgbọala n'ógbè Ejiri Uwe Akpụkpọ ụkwụ 150W Igbe akpụkpọ ụkwụ Akpụkpọ ụkwụ Shoebox 240W Ejiri Azụ Uwe Akpụkpọ ụkwụ Akpụkpọ ụkwụ nke Shoebox